Ny China dia nampiorina ny trano fialan-tsasatra miaraka amin'ny mpanamboatra endrika mahitsizoro | Yubing
Ny rano mafana avy amin'ny loharanon'ny hafanana dia alefa mankany amin'ny rafitra fizarana rano eo an-tampon'ny tilikambo amin'ny alàlan'ny fantsona. Mizara sy mizara ity rano ity eo ambonin'ny tokotanin-tsika mandamina ny famahanana ny tsindry ambany. Mandritra izany fotoana izany, ny rivotra dia misintona amin'ny alàlan'ny fidiran'ny rivotra avo kokoa eo am-pototry ny tilikambo ary miakatra mankany amin'ny alàlan'ny famenon-tsena mando izay mifanohitra amin'ny rano mikoriana. Ny ampahany kely amin'ny rano dia etona ary manala ny hafanana amin'ny rano sisa tavela. Ny rivotra mafana mando dia alaina avy eo an-tampon'ny tilikambo mangatsiaka avy amin'ny mpankafy ary alefa any amin'ny atmosfera. Ny rano mangatsiaka dia mikoriana mankamin'ny koveta eo amin'ny farany ambany amin'ny tilikambo ary miverina amin'ny loharanon'ny hafanana. Ity famolavolana ity (famoahana ny rivotra mitsangana) raha jerena ny rivotra mafana dia miakatra miakatra ary misy elanelam-potoana manelanelana ny fidiran'ny rivotra madio sy ny toeram-pivoahan'ny rivotra mafana mando mba hampihenana ny fahafahan'ny famerenana indray ny rivotra.
Tombontsoa amin'ny Tower Open Cooling Circuit:
Fihenan'ny angovo (Io no tilikambo fanamafisana mahomby indrindra amin'ny indostria)
Fiantraikany amin'ny tontolo iainana ambany (mpampihetsiketsika ambany ary mpankafy mahomby)
Mateza matevina sy maivana ho an'ny fametrahana mora foana sy ny fikojakojana.
Rafitra fanoherana avo lenta hihaona amin'ny fepetra takian'ny rivotra sy ny fahanginana.
Safidy azo ovaina amin'ny ampahany lehibe amin'ny tetikasa namboarina manokana.
Structure ary Panels
Ny tilikambo fihenan-tsakafo ICE dia mampiasa ny ravina vy mifono vy manohitra ny harafesina izay misy ny zinc ho mpiorina lehibe indrindra, miaraka amin'ny Al, Mg ary silikika marobe.
Ny fantsom-by (mitovy fitaovana amin'ny vala) feno miaraka amina ambany famolavolana hisorohana ny fihenan'ny rano. Ary izy io dia misy fifandraisana amin'ny fivoahan'ny rano miaraka amin'ny sivana anti-vortex, fifandraisana misy rà mandriaka ary mihoampampana, fifandraisana rano fanamboarana vita amin'ny valizy mitsingevana, grilles fidirana anaty rivotra PVC manamafy sy fantsom-pandosana mandeha ra.
Mameno ny Deck / Exchanger hafanana
Ny tilikambo fisakafoanana misokatra mahitsizoro ICE dia miaraka amina fonosana famenoana herringbone miompana manjavozavo vita amin'ny volavolan-tànana vita amin'ny fantsom-bokatra vita amin'ny fantsom-bokatra vita amin'ny fantsom-bokatra vita amin'ny fantsom-baravarankely mba hampitomboana ny fahombiazan'ny fifanakalozana hafanana.
Ny tilikambo fisakafoanana misokatra ICE misokatra miaraka amin'ireo mpankafy axial farany, miaraka amin'ny impeller voalanjalanja sy ny lelany azo ovaina miaraka amin'ny mombamomba ny fahombiazany. Ireo mpankafy tabataba ambany dia misy raha ilaina.
Previous: Towers hihena-mikoriana ny tavoahangy boribory
Manaraka: Towers fanamafisana mihodina mihombo-mikoriana miampita / fantsom-pifamoivoizana mihidy
Rectangular Tilikambo fihenan'ny karazana Open